Maal-qabeen la afduubtey oo sharaxay sababta uu u dalbaday in la dilo
DAR ES SALAAM, Tanzania – Maal-qabeen reer Tanzania ee Maxamed Dewji ayaa sheegay in uu waydiistay kooxdii afduubatay in ay toogtaan markii ay lix maalmood haysteen.
Afuubkiisa oo 12-bilood kahor ka dhacay meel ku dhow huteel ku yaala magaaladda ugu weyn dalkaas ee Dar es Salaam ayaa sababay howlgal balaaran oo baadigoob ah.
Isaga oo markii ugu horeysay saxaafada uga warbixinaya xasuustiisa, Mr Dewji ayaa u sheegay BBC-da in indhaha laga xiray lana jahwareejiyay markii codsiga gudbiyey.
Tobban maalmood kadib ayaa xorriyadiisa loosoo celiyay, isaga oo xusay in aan la bixin wax lacag oo madax furasho ah.
“Indhaha ayaa layga xiray dhowr jeer ayey iigu goodiyeen iyaga oo qoriga madaxa igaaga haya in aan baaqi kusii ahaan doono gacantooda shan ama lix maalmood kadib waxaan maleeyay in aan araga beelay,” ayuu yiri.
Dadweynaha kala duwan ee isaga u rajeeyay in uu xorriyadiisa dib ugu helo sidda ugu dhaqsiyaha badan ayuu aad ugu mahadceliyay.
Ganacsadaha ayaa ku daray: “[Midka isoo qafaashay] wuxuu igu dhahay ‘waan ku toogan doonaa’ kadib waxaan ku dhahay ‘waad i toogan kartaa waliba idil, maxaa yeelay waan khasaaray oo waad i jahwareerisay”.
Maxamed ayaa daboolka ka qaaday in uu maqlay codadka dadyow dhowr ah, kuwaasoo baadigoobaya isaga ruuxadiisa.
“…waad isku dayday [dilka]…maxaa yeelay waa qayb kamid ah jirdilka,” ayuu hadalkiisa kusii daray maalqabeenka.
Tobban maalmood kadib afduubkii October 2018-kii, shirkadiisa, MeTL, ayaa Twitter-ka kusoo qortay “Mudane Dewji wuxuu hoygiisa ugu soo laabtay isaga oo badqaba qaab ammaan ah”.
Mr Dewji ayaa u sheegay BBC-da in kooxda qafaalatay ay kasoo saareen dhisme, kaasoo qiyaastii 15-daqiiqo u jira halka ay ka kaxeysteen oo ah huteelka Coliseum, oo ah nooca loo tamashlo tago.
Mas’uuliyiinta ayaa illaa iyo haatan aan kala caddeyn ujeedada dhabta ah ee loo afduubtay, xitaa isaga mad-madow ayaa uga jira.
“Illaa iyo haatan ma ogi sababta ay waxaan u dhacday,” ayuu xusay. “Dareenkeyga waxay rabeen lacag, dhamaadkii waxay iga tageen iyaga aan helin”.
Tujaarkan ayaa rumeysan in dableyda ay ka quusteen in ay abuureen cadaadis ay sameyso warbaahinta iyo xiisad siyaasadeed.
Darawal taksi, oo lagu magacaabo Mousa Twaleb, ayaa xabsi ku jira, isaga oo sugaya maxkamadeyn. Balse kaliya waxaa looga shakisan yahay in uu qayb ka ahaa howlgalka afduubka ah.
“U baahan in uu dib u laabto”
Mr Dewji oo aaminsan in dableydu ay gaareysay saddex ama afar kuwaasi oo u kala dhashay Mozambique iyo Koonfur Afrika, ayaa tibaaxaya in ay haatan gebi ahaanba isaga carareen dalka.
Maalqabeenka ayaa sheegaya in uu isbedel ku sameeyay noloshiisa. “Waxaan bedelay leerarka gurigeyga oo ka dhigay kuwa midab leh”.
Si lamid ah wuxuu joojiyey in uu xeebaha ku rucleeyo isaga kaligii. Taas macnaheedu wuxuu yahay in uu xoojiyey ilaaladda.
“Waxay ii sheegeen in aan u baahanahay in aan dib u laabto,” ayuu hadalkiisa ku daray Maxamed, oo wareysiga si furan ugu xog-waramay.
Mr Dewji ayaa ku guuleystay in uu reerkiisa uu ka saaro ganacsiga jumlada iyo tafaariiqda, isaga oo ka dhigay mid kamid ah kuwa ugu taajirsan Afrika.
MeTL ayaa soo saarta dharka, burka khamadiga laga sameeyo, cabitaanadda macaan iyo saliida cuntada oo laga isticmaalo ugu yaraan lix dal oo qaaradda Afrika ah.
Aduun lacageed dhan 400 milyan oo Doollar ayuu damacsan yahay in uu beeraha Tanzania ku maalgeliyo 24-ka bilood ee soo aadan. “Ma ahan si aan macaash u sameeyo, waa in aan saameyn yeesho,” ayuu tibaaxay.
Mohammed Dewji, oo lagu sheegay maalqabeenka ugu da’da Afrika ayaa lacagta uu haysto waxay gaareysaa 1.5 bilyan oo Doollar-ka Mareykanka ah, sidda lagu sheegay mareega Forbes oo dhaqaalaha ka faalooda.